SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii 5aad ee sindibaad iyo odaygii jaziirada qeybtii 43aad. – Filimside.net
Taariikhda: February 6, 2019
Waxaan ka cudur daaranayaa hadii aad kala kulantaan sheekada error typing inaad ii cudur daartaan waayo boobsiis ayaan ku qoray waqtiga oo igu yaraa dartiis.
Sheekada waxay noo mareysay markii aan kazoo sheekeynay siduu layaabka laheyd ee uu sindibaad uga badbaaday safarkii 4aad ee dhibka badnaa waxaan kale oo aan soo sheegnay in magaaladiisii dib ugu soo laabtay asigoo wato hanta aad u fara badan.
Sindibad ayaa wuxuu yiri markii aan baqdaad imaaday oon in mudo ah joogay ayaa waxaa isoo galay damac ah inaan markale safro waliba toogtaan waxaan niyeystay markab aan aniga leeyahay inaan ku safro.
Wixii aan is diyaariba ugu dambeyn markab ayaan iibsaday waxaana ka buuxiyay badeeco aad u fara badan anigoo qeybtii soo hartayna ganacsato kale ka kireeyay waxaana isku soo deynay badii.
Waxaan bilownay inaan safarkii gudo galno aan maalinba jaziirad ku istaagno badeecadana ka iibino ilaa aan maalintii dambe jaziirad ka imaanay, waqtigaas aniga aad ayaan u daalanaa sidaas owgeed waxaan ganacsatadii u sheegay inaan xoogaa yara seexanaayo ee hadii ay iyaga rabaan ay baxaan.
Ganacsatadii ila socotay markii ay markabka ka dagteen oo jaziiradii gaareen ayaaa waxay arkeen wax weyn oo cad misna sidii qubada u wareegsan markaas ayay bilaabeen iney hubiyaan wuxuu yahay waxayna ku garaaceen dhagaxmaan ilaa uu wixii weynaa ee cadaa ka dilaacay waxayna aheyd haad weyn ukuntiisa.
Markii ay ukuntii dilaaciyeen ayaa waxaa kazoo baxay ilmihii haadka oo markaas noolaa sidoo kalana maalin ama labo maalmood inuu ukunta kazoo baxo uga dhineed, markaas ayay haadkii ilmihiisii qasheen misna bilaabeen iney hilbihiisii karsadaan.
Aniga mudada intaas la eg oo dhan waan iska hurdayaa markii aan soo kacay ayaa waxay ii keen hilibkii ilmihii haadka markii aan weydiiyayna sidey wax u dhaceen ayay ii sheegeen.
Anigii madaxa ayaan qabsaday waayo waxaan ogahay waxa ay sidaas yeeleen inuu yahay haad weyn ukuntiisii hadii uu nagu imaado misna arko sida ukuntii laga dhihgayna ay noo dhamaatay markaas ayaan bilaabay inaan af labadii qeyliyo anigoo leh war soo cararaaay hadii aad naftiina ka naxeysaan soo cararaay.
Intii aanba hadalka dhameynin ayay halmar qoraxdii qarsoontay mise waaba haadkii oo soo socdo markaas ayaan bilaabay inaan markabkii jiheeyo badana kusii daayo rakaabkiina iyagoo ordaya ayay markabkii isku soo shubeen.
Shimbirkii haadka ahaa markii uu arkay sida ukuntiisii laga yeelay ayuu aad u carooday wuxuuna bilaabay inuu sidii gugaca u qeyliyo waxaana isla markiiba meesha yimaaday shimbir kale oo asiga la eg waxayna bilaabeen iney nasoo eryadaan hase yeeshee bada ayaan isku sii deynay.
Shimbirihii markii ay na arkeen ayay naga laabteen aniga waxaan niyada iska dhahay alx marba hadii ay idinka laabteen waxaana bilaawnay inaan safarkeenii sii wadano.
Wixii aan soconaba markii aan cabaar soconay ayaan waxaan arkay labadii shimbir oo nasoo daba socda lkn markaan kaligood ma aysan aheyn ee dhagaxmaan ayay lugaha ku wateen dhagaxmaantaasoo aad u waaweynaa.
Sidii ay marba marka kasii dambeysa noogu soo dhawaanayeen ayay markii dambe dhagaxmaantii oo aad u waaweynaa nagu soo daayeen iyagoo waliba si daran markabkii ugu garaaceen wuxuuna markabka noqday mid biyaha u nugu oo sii quusay ilaa uu moolka bada ka gaaro anagana aan dhamaanteena ka maanshowno.
Aniga waxaan gudo galay sidii aan naftedii ku badbaadsan lahaa waxaana gacanta la helay alwaax weyn anigoo soo qabsaday ilaa uu iga keeno xeebta jaziirad aad u qurux badan oo ay ka baxaan nooc kasta oo miro ah sidoo kalana waxay laheyd ilo biyo macaan leh, markaas ayaan murugtii iyo kurbadii I heysay iska ilooway waxaana bilaabay inaan mirihii iska cuno ilaa aan ka dhargay.
Galabkii markii la gaaray ayaan is dhahay maad jaziirada soo fiirisid waa intaasoo ay dad ku nool yihiine, halii ayaana kazoo kicitamay sidii aan jaziirada ugu wareegaayay ayaan markii dambe waxaan arkay oday da’ ah kaasoo hagoog ka dhigtay caleemiha geedaha misna meel qorax ah fadhiyo kaligiis.
Waxaan is dhahay odaygaan amuu kamid yahay rakaabkii markabka isla markaasna uu badbaaday waxaana bilaabay inaan u soo dhawaadi ilaa aan markii dambe kor imaado hase yeeshee ma uusan aheyn oday aan aqaano rakaabkii markabkana kama mid aheyn.
Waamn usoo dhawaaday anigoo bilaabay inaan weydiiyo su’aal ah sheekhow maxaa kugu dhacay maxayna tahay sababta aad kaligaa cidladaan u fadhiso?
Odaygii wuu isoo fiiriyay hase yeeshee ilama uusan hadlin wuxuuna ii tilmaamay inaan jidka ka qaado oo aan geedka hoostiisa dhigo.
Markaas ayaan bilaabay inaan garab siiyo anigoo niyada iska leh odaygaan miskiinka ah garab sii waxaana kusoo qaaday garbaheyga anigoo lasoo aaday dhankii uu geedka naga jiray.
Markii aan geedkii hoos keenay ayaan is dhahay odayga daji hase yeeshee ma ahan mid daganaya waxaana isku dayay dhowr mar inaan dajiyo lkn ha sheegin waxaan lahadlay odaygii si uu iiga dagto anigoo ku leh geedkii hoostiisa waan ku keenay ee dago lkn ma aheyn mid ila hado.
Markii dambe ayaan gadaal dhabarkeyga dhanka garbaha ka dareemay dhaqdhaqaaq waan fiiriyay waxaanse arkay arin layaab leh, waxaan arkay lugihii odayga oo isku badalay kuwa aad u madow sidoo kalana dhabarkeyga sidii gacmaha oo kale u heysto markaas ayaan isku naxay.
Waxaan is dhahay odayga iska tuur lkn ha sheegin ma ahan mid dhacayo ilaa aan markii dambe ka war helay odaygii oo madaxa iga garaacayo waliba garaacis aad u xanuun badan ilaa aan ka wareero istaagana ka dhaco.
Cabaar markii aan wareersanaa ayaan soo naaxay waxaana arkay odaygii oo wali dhabarka ii saran iguna dhagan……
La soco qeybta 44ad.
Fadlan walal xayaysiimaha webka saran midkasta hal mar Click sii adigoo mahadsan
Waxaa Aqrisay 1,109